ကောင်းမွန်ဝင်း: “ယူ နို မိ” နို.ဂျီးမ
တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ချို.ဂျပန်စကားအသံထွက်တွေဟာ မြန်မာ လူမျိုးတွေအတွက် အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးနဲ. သဘောပေါက်စရာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ နမူနာအဖြစ် ကျွန်မကိုယ်တွေ. ဖြစ်ရပ်လေး(၂)ခုကို ဖေါက်သည်ချလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ.မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ဂျပန်ကိုရောက်လာခါစ ဂျပန်စကားလည်း သိပ်မကျွမ်းကျင်သေးတဲ. အချိန်မှာ သူက စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သူ. နံမည်က “ကို တရုတ်ကြီး” ပါ။ အလုပ်လုပ်တာ ဒုတိယမြောက်နေ.ပေါ့။ “ကို တရုတ်ကြီး”အလုပ်လုပ်နေတဲ.အချိန် ဆိုင်ကိုလာစားတဲ. ဧည့်သည်တစ်ယောက်က သူ.ကို မကြာခဏလှမ်းကြည့်တယ်လို.ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ. တစ်အောင့်ကြာတော့ “ကို တရုတ်ကြီး”အဲဒီဧည့်သည်နားကို ဖြတ်ပြီးသွားတဲ.အချိန်ဧည့်သည်က “ကို တရုတ်ကြီး” ကို အသာအယာလက်ကုတ်ပြီး ခေါ်ပြီး ဧည့်သည်က သူ.မျက်နှာသူ လက်ညှိုးထိုးကာ “ယူ နို မိ” လို. ပြောတယ်တဲ.။ ကျွန်မရဲ.မိတ်ဆွေ“ကို တရုတ်ကြီး” ကလည်း ဧည့်သည်မျက်နှာကိုသေချာကြည့်ပြီး ခေါင်းယမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဧည့်သည်က သူ.ကို နောက်တစ်ကြိမ် သူ.မျက်နှာသူ လက်ညှိုးထိုးကာ “ယူ နို မိ” လို.ထပ်ပြောပါတယ်။ သူက ဒီတစ်ကြိမ်တော့ ဧည့်သည်မျက်နှာကိုနောက်ထပ်သေချာ ကြည့်ပြီး “ အိုင် ဒုန်. နိုး” လို. တစ်လုံးချင်းပြန်ပြော လိုက်ပါတယ်တဲ. ။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ဧည့်သည်ရဲ. ဒေါသ၊ ဆိုင်ခေါင်းရဲ. တောင်းပန်သံ တွေနဲ. ခုနက “ယူ နို မိ” နဲ. “ အိုင် ဒုန်. နိုး” ဆိုတဲ.စကားတွေအပြင် နောက်ဆုံးမှာသူသိလိုက်ရတာကတော့ သူ.ကို အလုပ်ရှင်နဲ. ဆိုင်ခေါင်းက ဂျပန်စကားသေချာတတ်တော့မှ ဆိုင်ကိုပြန်လာအလုပ်လုပ်ဘို.ပြောပြီး အလုပ်ထုတ်လိုက်တယ်တဲ.။ ကိုတရုပ်ကြီးလည်း ပထမတော့ ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ လိုက်မမှီဘူးပေါ.။ နောက်မှသူ.ကို တစ်ဆိုင်တည်းအလုပ်လုပ်တဲ. မြန်မာတစ်ယောက်က ပြန်ရှင်းပြမှ သူလည်း ဇတ်လမ်းကို သဘောပေါက်တော့တယ်တဲ.။ အဖြစ်က ဒီလိုပါ၊ ဧည့်သည်ပြောတဲ. “ယူ နို မိ” ဆိုတာ ရေနွေးကြမ်းပန်းကန်လုံးကိုခေါ်တာပါ။ ဧည့်သည်က သူ.မျက်နှာသူ လက်ညှိုးထိုးတာက သူ.ကိုယ်သူရည်ညွှန်းတာပါ။ ဂျပန်လူမျိုးတွေက သူတို.ကိုယ်သူတို. လက်နဲ.ညွှန်ပြရင် မျက်နှာ(သို.) နှာခေါင်းနားပတ်ဝန်းကျင်ကို လက်ညှိုးနဲ. ညွှန်ပြတတ်ကြပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သူ ရေနွေးကြမ်းပန်းကန်လိုချင်တယ်ဆိုတာပါ။ ဒါပေမယ့် ရေနွေးကြမ်းပန်းကန်ကို နောက်တစ်မျိုးအခေါ်အဝေါ် ဖြစ်တဲ. “အို ချာ့ ၀မ်း” လို. အလွတ်ကျက်ထားတဲ. “ကို တရုတ်ကြီး”လည်း “ယူ နို မိ”လို.နောက်တစ်မျိုးခေါ်တာကို ဘယ်သိပါ.မလဲ။ “ကို တရုတ်ကြီး”ထင်တာက ဧည့်သည်က သူ.ကိုယ်သူလက်ညှိုးထိုးပြပြီး You Know Me?　“ ငါ.ကိုသိသလား”လို.မေးတယ်ထင်ပြီး မသိတဲ.အကြောင်းကို သေသေချာချာ I don’t know လို.ပြန်ဖြေခဲ.တာပေါ.တဲ.။
ဒီအကြောင်းကို “ကို တရုတ်ကြီး” က ကျွန်မနဲ. သူငယ်ချင်းကေသီစိုးကိုရှင်းပြတော့ ကြံကြံဖန်ဖန် အဲလိုမျိုးဖြစ်ရလေရယ်လို “ကို တရုတ်ကြီး” ရဲ. အလုပ်ပြုတ်တာကို မေ့ပြီး ငိုအားထက်ရီအားသန်ဆိုသလို
သူငယ်ချင်းကေသီစိုးနဲ. အားရပါးရ ရီချလိုက်ကြပါတော့တယ်။
ကျွန်မရဲ.သူငယ်ချင်း စုမွန်နဲ.ဗညားတို. ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် ကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ. စင်္ကာပူကနေ ဂျပန်မှာတစ်နှစ်လာအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို.ရောက်ခါစမှာ သူတို.အတွက် လက်ကိုင်ဖုန်းလုပ်ပေးဘို. ဖုန်းဆိုင် ကို အတူသွားကြပါတယ်။ သွားခဲ.တဲ.ဖုန်းဆိုင်က ဖုန်းကုမ္ပဏီမျိုးစုံကဖုန်းတွေကို တစ်ဆိုင်တည်းမှာ ရနိုင်တဲ. ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တစ်ခုကိုသွားခဲ.ကြတာပါ။ ဆိုင်မှာဖုန်းကိစ္စ အားလုံးပြီးတော. ဆိုင်ကအထွက်မှာ သူငယ်ချင်းစုမွန်ရဲ. အမျိုးသား “ဗညား ”က “မမွန် ကျွန်တော်တို. အခုဖုန်းလုပ်တဲ. ဆိုင်နံမယ်က ဘယ်လိုခေါ်လဲ” တဲ. ကျွန်မက “နို.ဂျီးမ” လို. ဖြေပါတယ်။ ဗညားက အာမေဋိတ်လေသံနဲ. “ခင်ဗျာ၊ နို.ဂျီးမ --ဟုတ်လား၊ ဆိုင်နံမယ်ကလည်းဗျာ ကြံကြံဖန်ဖန်၊ အဲဒါဘာအဓိပါယ်လဲဟင်” တဲ. ။ ကျွန်မက နို.ဂျီးမ ဆိုတာ ရိုးရိုးနံမည်ပါပဲလို.ပြောတော့။ သူက “အောင်မလေးဗျာ ရိုးရိုးနံမည်မို.လို.ပဲ။ ဆန်းဆန်းပြားပြားသာဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင်ရှိမလဲဆိုတာ မတွေးဝံ.စရာပဲ”လို.ပြောပါတယ်။ ကျမလည်းသူဘာ့ကြောင့်အဲလိုပြောတယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အနားမှာရှိတဲ. ကျွန်မရဲ. ခင်ပွန်းနဲ. စုမွန်တို.က ဗညားနဲ.အတူ ရီကြပါတယ်။ မရီနိုင်တဲ. ကျွန်မကို စုမွန်က တိုးတိုးတိုးနဲ. အကျယ်တ၀န်.ရှင်းပြပါတယ်။ ကျွန်မလည်း စုမွန်ရဲ.စကားဆုံးမှ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်ပြီး နောက်တတ်တဲ. ဗညားရဲ. စကားကို ရီရပါတော့တယ်။
အတွေးဖွ တဲ. နို.ဂျီးမ
အလုပ်ကြိုးစားနေသော ကိုတရုပ်ကြီး နဲ. ကနေဒါက ဗညားနဲ. စုမွန်ကို သတိရလျှက်
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Tuesday, September 01, 2009